Uvimba weeNgcaciso zeNethiwekhi
Udidi: Inethiwekhi yePoly
Inethiwekhi yePoly inikezela ngeNdawo eMhlophe yokuCebisa iHacker kwiNkampani
Ukuhlaziywa: 17 Agasti 2021
Ukulandela inkohliso yomnatha osandul 'ukushukumisa ishishini, umthetho olandelwayo wezemali (DeFi) protocol Poly Network inikezele ngesikhundla sokucebisa kunye nomvuzo weedola ezingama-500k kumgculeli, obizwa' Mnu. Umnqwazi Omhlophe. '
Kuhlaziyo lweendaba ngolwe-Lwesibini, iqela lePoly Network liqaphele ukuba banikezela nge-hacker, eqale yeba ngaphezulu kwe- $ 600 yezigidi ze-crypto-asethi, isikhundla sokuba ngumcebisi oyintloko kwezokhuseleko kwinkampani yokusebenzisa ubuchwephesha. Inkampani ikwanyanzelisa ukuba ufumane umvuzo we-500,000 yeedola kubagculeli, abathi ngaphambili bancipha. Inethiwekhi yePoly yathi:
“IPoly Network ayinanjongo zokubamba uMnumzana White Hat uxanduva ngokusemthethweni, njengoko siqinisekile ukuba uMnumzana White Hat uzakubuyisa ulawulo olupheleleyo lweeasethi kwiPoly Network nakubasebenzisi bayo.
Njengokuba besesitshilo kwizibhengezo zangaphambili nemiyalezo ebhaliweyo ethe yavakaliswa esidlangalaleni, sinombulelo ngegalelo likaMnumzana White Hat elongezelelekileyo kukhuseleko lwePoly Network. ”
Ukuqhekeka kwathiwa kwenzeka nge-10 ka-Agasti, emva kokuba abahlalutyi belumkise malunga ne-611 yezigidi zeedola ebiwe kwinethiwekhi yePolygon, iBinance Smart Chain, kunye ne-Ethereum. Umgculeli emva koko uxelele iqela ngemiyalezo ebethelelwe kwintengiselwano ye-Ethereum echaza iinjongo zabo zokubuyisa imali. Iqela liqaphele ukuba babona uhlaselo njenge- “Umnqwazi omhlophe” isenzo, esichaza isigqibo seqela lokuvuza umgculeli.
Inethiwekhi yePoliyenti enethemba ngekamva leProjekthi
Iqela longeze ukuba bangabo "Ukubala iingcali ezininzi ezinje ngoMnu. White Hat ukuba zibandakanyeke" kuphuhliso lweprojekthi, "Kuba sikholelwa ukuba sabelana ngombono wokwakha inkqubo ekhuselekileyo neqinileyo esasazwayo."
Oko kwathethileyo, abagcini babuyise konke kodwa i-33 yezigidi zeedola kwi-frozen ye-USDT de kwafezekiswa ezinye iimfuno ezingachazwanga.
Ama-Asides ukusuka ekungakwazini okwethutyana kwabanye abasebenzisi ukufikelela kwimali yabo, ukutyiwa umnqwazi omhlophe kube nefuthe elihle kuluntu lwePoly Network nakwicandelo leDeFi.
tags Cryptocurrency, yimfumba, iindaba, Inethiwekhi yePoly